Dress ihembe: esisebenzayo, enhle futhi stylish
Ayikho ophikayo iqiniso lokuthi intombazane, begqoke iyembe kancane likhulu kakhulu yomuntu yakhe ayithandayo abasha ubukeka nje kuphela enhle, kodwa futhi Day sexy. Kuyindida kodwa isibindi kwentiwe ngemabomu futsi inkimbinkimbi ihembe kahle kugcizelela fragility nangobuciko encroached ku ikhabethe isoka amantombazane, lembula ubufazi yayo nesisa. Kodwa ngaphambi kokuba ummeleli kangaka wobulili bubuhle lo muntu nzima kakhulu ukumelana - nje ufuna kulondolozwe futhi kuvikelwe obucayi indalo eyisimangaliso, shaya tandla elingenacala nemivimbo engu lovely.
Bebona lokhu iphethini, nabaqambi engumthengisi izingubo ngokushesha yasungulwa kukho olukhulu abesifazane bagqoke mathupha. Manje, igama plain - ihembe, okokuqala walizwakalisa kancane engaphansi kwekhulu edlule, edume Koko Shanel, ehlanganisa ezihlukahlukene ongakhetha imifanekiso ehlukene - kusukela elula kuya eyinkimbinkimbi kakhulu.
It uxhuma kubo esilandelayo. Noma yimuphi ihembe ingubo has a ukuyona noma ukuhogela isimiso a kimono phambi kanye collar ehlukile. Lokhu kulandelwa indiza emcabangweni: isitayela, izinto, imibala, futhi jikelele obuphelele orientation kungahluka kakhulu.
Ngokusho izindlu catwalks fashion lanamuhla ezingcolisa onobuhle satin usilika igqoka ukuncishiselwa jacket. Lena - elikhanyayo njalo futhi ezimibalabala eduze esinamathelayo ingubo nge isiketi ayisesemikhulu zimi kahle zilungele usuku lwezithandani, futhi umsebenzi ehhovisi. Kubukeka ihembe omkhulu futhi ingubo e safari isitayela: okhakhi, ibhande yokuqala, cuffs nge imikhono esifushane noma emithathu ikota, emaphaketheni ujike phansi phezu kwesifuba, collar kanye nobude esiqinile kuya maphakathi no-ethangeni. Lokhu ngubo ukuhlobisa ngokuphelele yimuphi owesifazane.
In parallel kule mikhuba, kunomkhuba oye kufika kithi evela ezingxenyeni ezikude 60-yalolucwaningo kwekhulu elidlule - the indie. Lokhu plaid ihembe esifushane noma eside eyenziwe ukotini Indwangu, amelela kukho olukhulu ekuphileni kwansuku zonke, emaphandleni uhamba noma ebhishi ngamaholidi. Futhi wanezela kuya isithombe izesekeli ewubuciko, ungaya ngokuphepha ephathini stylish. cute kakhulu futhi romantic ukubukeka efana imodeli mahhala imbali noma nemifino imibala.
Dress ihembe - ngokwawo ngubo oludonsa kakhulu, okuyinto, ngenxa ngobufushane yayo futhi cishe Minimalism ahlukile, uyakwazi esikhiqiza isithombe ocacile lomqondo. Noma kunjalo, umbuzo evame ukubuzwa, sizogqokani nehembe ingubo, ziningi izimpendulo yasekuqaleni.
ibhodi okunjalo kufanele kube izicathulo izicathulo avaliwe sesithende esiphezulu, amabhuzu okusezingeni eliphezulu futhi pretty omkhulu izimbadada nge nhlonhlo izithende noma platform. Kulokhu, lo ihembe eside "dolobhana" isitayela okwaziyo futhi elula Nokwelukiweyo nezicathulo a yedwa flat.
Dress ihembe angaba nobuqambi kakhulu ukuhlanganisa ezihlukahlukene eziqongweni cute, leggings, abamnyama tights ngomala, jeans ngisho iziketi. Ngokwesibonelo, i-nomkhankaso wokusebenza, kufanele kube kancane "ezolile ', buhlanjululwe indiza ingubo imbali ehlobo, wabeka phezu kwalo phezulu okuyisidina.
Ukuzizwa imfashini kakhulu emcimbini noma ukuvakasha, kuya jeans evamile zakudala kanye topu engeza njengoba cape stylish onamileyo ingubo-shirt. Isinqumo esilandelayo sokuba namantombazane njalo ngesibindi okweqisayo. Phezu Fluffy isiketi elihlale ezinemibala egqamile, wagqoka osevele ihembe obhince ibhande ububanzi okhalweni.
Ukuze ekwindla-ubusika isizini muhle kakhulu ukuthi lokhu ihembe efudumele-ingubo nge leggings noma tights obukhulu imibala ocebile nge iphethini. Tights ungayithola enye ngempumelelo kanye jeans elula.
Ngakho, ihembe - ingubo enemisebenzi nganoma yisiphi isikhathi sonyaka ukuthi Ilungile yonke nowesifazane intombazane.
Ngocingo: izici zedivayisi
Yini umfutho komzimba
Isiqeshana "Antihrap" - ukubuyekezwa. ngempumelelo nokusetshenziswa ngokuphepha Ukugunda kanjani
Imvumelwano Enelukuluku egameni Eugene
Isikhunta egumbini lokugezela